အဆိုပါ mesolimbic စနစ်သည် naltrexone-induced လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၏နောက်ကြောင်းပြန်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည် - VTA naltrexone အုပ်ချုပ်မှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသောနှင့်လိင်နွမ်းနယ်နေသောကြွက်ကြွက်များ၏သုတ်ဆေး (2013) - Your Brain On Porn On
အဆိုပါ mesolimbic စနစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ naltrexone-သွေးဆောင်ပယ်ဖျက်ခံရထဲမှာပါဝင်: လိင်အတွေ့အကြုံရှိ၏သုတ်ရည်ထိပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naltrexone အုပ်ချုပ်ရေးအတိုက်အခံသက်ရောက်မှုများနှင့်လိင်မောအထီးကြွက် (2013)
ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2013 နိုဝင်ဘာ 1; 256: 64-71 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2013.07.056 ။
Garduño-Gutierrez R ကို, Leon-Olea M က, Rodriguez-Manzo, G.
Departamento de Farmacobiología, Cinvestav Sede Sur, Calzada de los Tenorios 235, ဗိုလ်မှူးကြီး Granjas Coapa, Delegación Tlalpan, CP 14330, México DF, Mexico; Department of Nacional de Psiquiatría“ Ramón de la Fuente Muñiz”, Av ။ Departamento de Neuromorfología Funcional, Dirección de Neurociencias, Inst ။ México-Xochimilco 101, ဗိုလ်မှူးကြီး San Lorenzo Huipulco, CP 14370, México, DF, Mexico ။
အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုပြပွဲစနစ်တကျ opioid အဲဒီ receptor ရန်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပြောင်းပြန်နိုင် (72h န်းကျင်) တစ်ကြာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးရောက်ရှိသည်အထိ copulate ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ သုတ်ရည်ထိပု mesolimbic dopaminergic စနစ် (MLS) မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် endogenous opioid လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, endogenous opioids, အ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှာသရုပ်ဆောင်သည် MLS များ၏လှုပ်ရှားမှု modulate ။
ကျနော်တို့ endogenous opioids VTA opioid receptors နှင့်အတူအပြန်အလှန်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ရန်ကြောင်းတွေးဆခြင်းနှင့်အကျိုးဆက် opioid ရန်ဖြင့်၎င်း၏မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သူတို့အား receptors မှာကြိုးပမ်းခဲ့တယ်နိုင်.
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့လိင်မောအထီးကြွက်များ၏ပြီးသားထူထောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးအပေါ် non-တိကျတဲ့ opioid အဲဒီ receptor ရန် naltrexone (0.1-1.0μg / ကြွက်) ၏ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ပြုတ်ရည်၏သက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ naltrexone-mediated မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အတွက် VTA δ-opioid receptors ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေပါဝင်ပတ်သက်မှု elucidate ရန်, ရွေးချယ်δ-opioid အဲဒီ receptor ရန်၏ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများ၏ဆိုးကျိုးများ, naltrindole (0.03-1.0μg / ကြွက်) ကိုလည်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ0.3μg naltrexone ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ဆေးထိုးလိင်မောကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးပြောင်းပြန်ကြောင်းပြသ, နှစ်ခုအဆက်ဆက်သုက်ဖေါ်ပြခြင်းနိုင်စွမ်းတိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးတိုးချဲ့ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်သက်သေ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naltrindole မဆိုထိုးမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ် reverse ခဲ့ပါဘူးထုံမွှန်း။ ဒါဟာ MLS စနစ်တကျ naltrexone အားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ပယ်ဖျက်ခံရနှင့်μ-တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းကောက်ချက်ချပေမယ့်မပေးδ-opioid receptors ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည်. လိင်ကြုံတွေ့အထီးကြွက်မှအချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naltrexone ပြုတ်ရည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်လိင်မောကြွက်၏အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကားရပ်အပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA naltrexone ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများဆွေးနွေး.
မူပိုင်ခွင့်© 2013 Elsevier BV All rights reserved ။